Ny fizahana vola 2000 dolara nosoniavin'i Steve Jobs dia miakatra amin'ny lavanty | Avy amin'ny mac aho
Natao indray ny memorabilia mba hahafahan'ireo izay tia ny endrik'i Steve Jobs, mahazo sombin-javatra vaovao mifandraika amin'ny iray amin'ireo mpiara-manorina an'i Apple, miaraka amin'i Steve Jobs. Amin'ity indray mitoraka ity dia fizahana $ 2.000 nosoniavin'i Steve Jobs avy ny kaonty manokana nananany tao Bank of America.
Ity fanamarinana ity $ 2.000, Steve Jobs no nanome an'io ny sakaizany tamin'izany fotoana izany, Tina Redse tamin'ny 11 martsa 1988 ary manana vidiny $ 20.000 XNUMX, vidiny sarobidy kokoa ho an'ireo rehetra tia ireo vokatra nifandraisan'i Steve Jobs.
Nihaona tamin'i Steve Jobs i Tina Redse tany am-piandohan'ny valopolo taona, nandeha tamin'ny daty maromaro izy ireo mandra-pihaonany ny vadiny Laurene Powell Jobs. Araka ny tantaram-piainan'i Walter Isaacson, Steve Jobs, Niaraka tamin'i Jobs ho amin'ny Super Bowl i Redse, izay nanehoana ny doka Macintosh malaza, ary nandeha tany Eropa niaraka tamin'i Steve izy rehefa natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Eropa ny orinasa.
Steve Jobs sy Tina Redse dia niaraka tamina efa-taona, tonga hiaina izany ao amin'ny tranon'i Jobs mandritra ny efa-taona. Saingy nifarana tamin'ny 1989 ny fifandraisan'izy ireo, satria toa tsy te-hitondra lavitra ny fifandraisan'izy ireo i Tina ary nolaviny hatrany ny fangatahan'ny fanambadian'i Steve Jobs, zavatra iray izay niafara tamin'ny fanapahana ny fifandraisana.
Ilay tseky dia natao lavanty tamin'ny sakaizan'i Steve Jobs ihany koa ampidiro ny nomeraon-telefaoninao sy ny adiresinao amin'izay. Ny lavanty dia i Nate D. Sanders Auctions, mpitarika ny indostrian'ny varotra otogramanana sy antontan-taratasy. Raha efa nitady autografie Steve Jobs taloha ianao dia azonao atao ny mijanona Ity rohy ity ary mampahafantatra anao ny zavatra takiana ilaina mba hahafahanao mandray anjara amin'ny lavanty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Hisy varotra $ 2000 nosoniavin'i Steve Jobs ho an'ny lavanty